wararka maanta-arlaadii.net » Wariye muddo 5 maalmood ah kuxiran xabsiga Jowhar
Xabsi kuyaala magaalada Jowhar ayaa weli waxaa kujira Wariye Cabdi Shakuur Shaashaa oo ka mid ah Wariyayaasha ka howlgalla Gobolkaas ahna Milkiilaha Idaacadda Cityfm ee Magaalada Jowhar, oo Ciidamada Booliiska Magaalada Jowhar xabsiga dhigay 28kii December.
Maalintii Shanaad ayuu ku jiraa Xabsiga Jowhar,waxana la sheegay in amarka lagu xiray Wariyaha ay leeyihiin Maamulka Shabeellaha Dhexe,kuwaas oo aan weli soo bandhigin sababaha loo xiray.
Ismaaciil Cabdulle Zabriye Gudoomiyaha Ururka Saxafiyiinta Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in ay Masuuliyinta Maamulka kala hadleen balse ay u sheegen in madaxtooyda Hir-Shabeelle uu u xiran yahay isla markaana xarigiisa uu noqday isku tuur tuur sida uu hadalka u dhigay.
Waxa uu sheegay in Xildhibaano ka tirsan Hir-Shabeelle ay iminka wadaan xal ku aadan in uu xurriyadiisa helo Wariye Cabdi Shakuur Shaashaa.
Ugu dambeyn waxa uu sheegay in Wariyayaasha Gobolka Shabeellaha dhexe ay ka dalbanayaan Maamulka hir-Shabeelle in ay dib xurriyadiisa u siiyaan Wariyaha maadaama ilaa iyo hadda aysan cadeyn dembiga ay ku heystaan.